Iidoli eziNtsundu eziMnyama eziNyanisekileyo kwi-Ebony Love Doll yokuhambisa simahla
Iinyani eziyinyani zoSondo oluNtsundu lwase-Afrika
ngamnye unodoli wesini omnyama yenzelwe ukwenza ukuba iingcinga zakho eziphambeneyo zibe yinyaniso kwindawo yabucala yegumbi lakho lokulala. Iinkcukacha ezinjengobomi ezandleni nasezinyaweni zakho zenza ukuba i-head-to-toe-toe ibe namava avuselelayo, kwaye ufuna ngakumbi. Unodoli we-Ebony wesondo lolona khetho lulungileyo loonodoli bezesondo benyani kunye no-Afrika waseMelika oonodoli bothando!
Kutheni uthenga ooDoli abaMnyama?
Eyona nto ikhethwayo yoonodoli benyani bothixokazi we-ebony kunye noonodoli bothando base-Afrika baseMelika! ! Kodwa yazi kwakhona ukuba nayiphi na idoli kwivenkile yethu inokukwenzela ulusu olumnyama! Ngaba ukhangela oonodoli abamnyama ngokwenyani? Ulusu lwabo lufana nolwabasetyhini baseAfrika, ulusu olumnyama noluqaqambileyo, ulusu olunomtsalane kunye nolwenyani. I-URdolls ikugubungele, iidodoli zesini ezimnyama ezingezantsi ziya kuba ngumthandi wakho olandelayo. Khumbula, zonke iidonki zethu zesini zinikezelwe kumgangatho ophezulu kunye nokuthunyelwa kwamahhala!
Ubabalo-Isitokhwe esibuyayo Amabele amakhulu Amabele WM117 Ukuthandeka kunye nokuDala abaDala abaDala abaDala
I-Ebony African American Amantombazana e-USA TPE kunye nesilicone yokwenene yesondo
Umgangatho wethu ophezulu oonodoli bothando abamnyama zenziwe ngobunewunewu, izixhobo ezikhuselekileyo ngabantu TPE kunye abicah. Awuyi kufumana nayiphi na into exutywe, engcolileyo, engaqondakaliyo apha. Kwizinto ezithambileyo kunye neziyinyani, sisebenzisa i-metal skeleton enamalungu aguquguqukayo ukunika unodoli isakhiwo. Zonke iiodolo zinokuthunyelwa simahla. Unodoli wesondo onjengobomi oonodoli base-Afrika baseMelika badla ngokuba nezinqe ezibanzi, ulusu lwetshokholethi emdaka, kunye neenwele eziphotheneyo ezimnyama, nto leyo engaqhelekanga ngokumangalisayo, kunye nokuhlola-ulusu lwabo oluntsundu lunomtsalane kwaye lunomtsalane.I-ebony eyinyani Unodoli wothando wase-Afrika-waseMelika wenziwa ngezinto zonyango ezikumgangatho ophezulu kunye nezikhuselekileyo ze-TPE kwaye zenziwe ngamantombazana amnyama e-ebony. Ukongeza, ulusu olumnyama lugcina imisebenzi efanayo, jonga kwaye uzive njengabafazi bokwenyani. Iithowuni ze-Ebony zinzima ngakumbi ukudaya kwaye zinokuzisa iziphumo ezinokwenyani ekufotweni.
Kutheni uThenga oonodoli beSexy Real abaMnyama?
Njengoko usenokuba uyazi, oonodoli bezesondo sele bekho ixesha elide, kodwa kusekho abathengi abaninzi abaziva beneentloni xa beqhagamshelana nathi okanye bacela ulwazi malunga noonodoli besondo njengokungathi iidoli zesini zaziyi-taboo, embi okanye engekho mthethweni. Kodwa inyaniso kukuba oonodoli bezesondo baziwa kakhulu kule mihla, kwaye bamkelwe ngakumbi kuluntu lwanamhlanje. Ifaka yonke into ukusuka kwetshokholethi emdaka kwesikhumba ukuya kwizinwele ezimnyama ezigobileyo, oonodoli besondo abamnyama bonisa imvakalelo ebuhlungu. Nokuba ukhangela TPE iidoli ezintandathuunodoli omnyama we-silicone, Iidola zeQita okanye oonodoli bezesondo zobungakanani bobomi, silona khetho lungcono kuwe. Ukhetho lwethu loonodoli bezesondo bokwenyani be-ebony baqala ukusuka kwiintsana ezibhityileyo ukuya kwizithixokazi ezigobileyo, zonke zineempawu ezikhazimlayo eziqinisekileyo ukuba ziya kukonwabisa. Ubuhle obuncinci obunentloni bunokuba yintombazana yamaphupha akho. Okanye umhedeni otyebileyo nonomtsalane unomtsalane kakhulu - singasathethi ke ngeempundu zakhe ezingqukuva, izibonda ezigobileyo kunye neenwele ezinde eziphotheneyo! Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi idoli ye-ebony yesini oyikhethayo, uqinisekile ukuba uyonelisa iminqweno yakho yasendle.Sinikezela ngeyona ndlela ingcono kakhulu yoonodoli abantsundu ngokwenyani ngamaxabiso afikelelekayo kunye nomgangatho ophezulu. Injongo yethu kukufumana oyena ubalaseleyo unodoli wokwenene ukwenza amaphupha akho abe yinyani, kwaye ukuza kuthi ga ngoku, sisebenza nabavelisi abaphezulu behlabathi ukukuzisela ezona modeli zibalaseleyo, amaxabiso kunye nokhetho lokwenza ngokwezifiso. Iqela lethu liya kuqinisekisa ukuba amava angcono omthengi aqinisekisiwe kwaye sikubonelela ngonodoli ofanele iimfuno zakho.
Ukuthunyelwa kwaMahala kunye neeNtlawulo eziKhuselekileyo
Sinikezela ngenqanawa yasimahla kumazwe amaninzi (e-US, eCanada, eOstreliya, eYurophu, eMzantsi Melika, njl.njl.), siyabuhlonipha ubumfihlo bakho, kwaye akukho mibhalo kwibhokisi enokuveza umxholo. Iintlawulo zigutyungelwa nguMgaqo-nkqubo wethu waBucala woMthengi, thina Ulwazi lwekhadi lakho letyala alugcinwanga, sisebenzisa i-Paypal ukuqinisekisa nokukhusela ulwazi lwekhadi lakho letyala kunye neentlawulo (akukho akhawunti yePaypal efunekayo, unokuhlawula ngedebhithi kunye namakhadi okuthenga ngetyala). Ukuba ukhetha ukusebenzisa i-banking transfer transfer, nceda uqhagamshelane nathi.Thenga i-high quality ye-sexy dolls kwi-sexy sex dolls ezigunyazisiweyo kunye nezisemthethweni zoonodoli, siyabakhathalela abathengi bethu kwaye sinikezela ngenkonzo yomthengi engcono kakhulu, ulwazi kunye neengcebiso xa kuthengwa iidoli zesini zabantu abadala. Gwema iziza ezithengisa oonodoli abakumgangatho ophantsi, oonodoli bethu bavavanywa kwaye bahlaziywa ngabathengi abaninzi veki nganye, ii-imeyile zethu zokubulela, ubungqina kunye namabali okuphumelela angenakuphikiswa, sifunde malunga nendlela amadoda aphila ngayo kwaye alala ngesondo kunye noonodoli bothando abadala be-Sexy Stories, wena. Uya kufumana ubomi UKUSUKA ngoonodoli base-USA lonto inokutshintsha ubomi bakho kwanomtshato wakho.
Iividiyo zikaNodoli oMnyama wesini:
Ukuze kukunike ukuqonda okungcono kwiidoli zesini ezimnyama kwaye ugweme ukukhohliswa, silungiselele le vidiyo ilandelayo ukuba ikunike ukuqonda okucacileyo kweedoli zesini ezimnyama.